Homeसमाचारल्वाङका फाइदा यस्ता छन् जान्नुहोस्
November 16, 2020 admin समाचार 6519
हामीले ल्वाङलाई सा’मान्य रुपमा लिन्छौं तर ल्वाङ धेरै गु’ण भएको मसला हो । यसले खाना’को स्वाद र सु’गन्ध दुवै बढाउँछ । स्वास्थ्य पनि यसले गजब बनाउँछ । ल्वाङले स्वा’स्थ्यलाई गर्ने फा’इदाका बारेमा जानिरा’ख्नुस् ।
लगा’तार खोकी लागिरहेको छ भने ल्वा’ङ चुसिरहनुस् । यसले खोकी निको पारि’दिन्छ ।
केही मानिसको सास गना’उँछ जसका कारण उनी’हरूलाई लाजमर्दो स्थिति आ’इलाग्छ । ल्वाङ चुस्दा मुख ग’नाउन छोड्छ ।
रुघा लागे’र नाक बन्द भएमा एउटा रुमा’लमा ल्वाङको तेलका केही थोपा हा’लेर सुँघ्नुस् । बन्द नाक खुल्छ र रु’घाबाट मुक्ति पाइन्छ ।
छाती पो’लेको छ भने दुईतीनवटा ल्वा’ङ एक गिलास पानीमा उ’माल्नुस् र त्य’समा मिश्री हालेर पिउनु’स् । ठीक हुन्छ ।
जोर्नी दुखेको र सुन्नि’एको छ भने ल्वाङको तेलले मा’लिश गर्नुस् । पीडा र पो’लेको कम हुन्छ । -खबरहब बाट
December 25, 2020 admin समाचार 6012
January 4, 2021 admin समाचार 6223
पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को ना’तिनी गायिक स्मिता दाहाल तथा गायक प्रताप दासको स्वर रहेको गीत ‘हेल्लो माया ब्यूटीफूल’ सार्व’जनिक भएको छ । गीतमा दिनेशकुमार थपलियाको शब्द तथा सुवास भुषा’लको संगीत छ । स्मिता स्नेहा इन्टरटेन्मेन्टको प्रस्तु’तिमा
मौरी मेरो भगवान भन्दै चाकासहितको मौरी बेचेर धनी भएका चेपाङ आए मिडियामा, (भिडियो हेनु’होस्)
March 10, 2021 admin समाचार 4976
अहिले चेपाङ समुदा’यको जिवनसैली फेरिदैं गएको छ । उनिहरु आर्थिक उपा’र्जनको काम व्यस्त छन् । चेपाङ समुदाय पछि’ल्लो समय शिक्षा, स्वास्थ्य लगायतका आधा’रभुत आवश्यकताको बारेमा निकै चनाखो भइसकेका छन् । पुर्खाहरु जंगलमै रमाएको भएपनि अहिलेनको
सुतेर पनि इम्युनिटी पावर बढाउन सकिने यस्तो छ जन’स्वास्थ्य विज्ञ डा. पाण्डेको सुझाव (223051)
सुशान्त केश’ले लियाे नयाँ मोड, रियाको भाइको ‘गोप्य च्याट’ बाहिरियो…हेर्नुहोस् (211918)
चर्चित हाँस्यकलाकार तथा समाजसेवी धुर्मुसको जन्मदिन आज, कति वर्ष लागे उनी ? थाहा पाउनुहोस् (209366)